Timo jaraha dhaadheer ee ugu fiican ragga, midkee ayaad doorbideysaa? | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | Timaha
Ragga waqti ka dib waxay ku guuleysteen inay ka baxsadaan timo jilicsan oo gaaban; Waxay ku ogaadeen timahooda hal dariiqo oo kale inay ku dareemaan xorriyad iyo sasabasho.
Timo jarista dhaadheer ayaa xoog yeeshay waqti kadib oo xitaa waxay bedeleen dhaqankii timajarayaasha ragga. Xirfadlayaal badan ayaa ku qasbay inay cusbooneysiiyaan qaabkooda iyo xalalka ay jareen si ay u sii hayaan macaamiisha.
Sawirada raga timaha dhaadheer markasta ka dhex istaag dadka. Gallants, geesinimo, indheergarad, geesinimo, dhalinyaro iyo inbadan oo badan waad xiran kartaa timo sasabasho sasabasho ah; runtu waxay tahay in si uun ama qaab kale ay u qabsadaan xiisaha qof kasta oo hareerahooda ah.
Waa lagama maarmaan in kuwa ku dhiirrada inay ku soo biiraan qaabkan cusub, ay si dhab ah u qaataan. Waxaa laga yaabaa inaysan mar dambe u baahnayn inay booqdaan timo jaraha si ay u ilaaliyaan goynta, laakiin waxay u baahan yihiin inay taxaddar kale muujiyaan si ay u muujiyaan timo dhalaalaya oo caafimaad qaba. Kuwani waa daaweyn la heli karo oo lagu sameeyo guriga ama xirfadlayaal. Hab kastoo la doorto, waxa muhiimka ahi waa dayactir.
In 2018 isbeddelka timaha ragga waa timo dhaadheer oo dhexdhexaad ah. Waxaa jira waqti koritaan marka qaabeynta ay adag tahay, laakiin waa arrin xariifnimo iyo waqti leh. Wax yar inyar ayey noqon doontaa suurtagal in la helo sida ugu fiican ee googo'yadan casriga ah.
1 Noocyada timaha dhaadheer
1.1 Duur goyn
1.2 Maxkamadda Surf
1.4 Dhex dhexaad
2 Dadka caanka ah ee dejiya isbeddellada timo dhaadheer
3 Tilmaamaha daryeelka timaha dheer ee ragga
4 Hipster Cut: Ragga oo Timo Dheer Sanadka
Noocyada timaha dhaadheer
Waa kan oo ay doorteen ragga doonaya inay u muuqdaan qaab aan daryeel lahayn. Sida muuqata, ma bixiyaan waqti ay ku qurxiyaan timaha, laakiin dhab ahaantii waxay ku qaataan waqti ka badan intii loogu talo galay inay sidan u ekaadaan. Haddii timuhu toosan yihiin ama hagaagsan yihiin, waxaa lagugula talinayaa inaad googo'is ku sameyso dhinacyada.
Ragga leh mowjadaha, timaha noocan oo kale ah waa kuwo aad u macquul ah oo si fudud loo xirayo. Rollers waxay si sax ah u bixiyaan mugga la rabo iyo muuqaalka duurjoogta.
Haddii ninku leeyahay muuqaalo jilicsan, ku raaci qaabkan gadhka maalinlaha ah Waxay siisaa ragannimo.
Iftiin, timo ruxruxa waa ikhtiyaar wanaagsan. Qaarkood waxay xirtaan midabka dabiiciga ah ee qorraxda ay maydhay, kuwa kale waxay u jeedsan karaan stylist-ka si ay u iftiimiyaan waxyaabaha ugu muhiimsan Waa a qaab aad u dabiici ah oo leh dherer aan sinnayn dhinacyada; Waxay kuxirantahay munaasabada, waa la gashan karaa dabacsan ama la xidhi karaa.
Waa muhiim ha calaamadin karbaash, laakiin in loo tuuro dhinacyo kala duwan iyadoo loo eegayo koritaanka. Xitaa xaflad rasmi ah habeenkii waxaad isticmaali kartaa jelka hagaajin
Waa qaabka lagu garto ragga leh timo aad u dhaadheer, inta ay leeyihiin timo taxaddar leh si aysan ugu dhicin dareenka khalkhalka. Waa timo timo taas waxay u taagan tahay fudeydkeeda iyo xarrago. Faraska dushiisa safka ugu dambeeya ayaa laga tagaa iyadoo aan la riixin; natiijadu waa buunshaha ama dabada laba jibbaaran.
Qaabkani dumarka maanta aad ayey u isticmaalaan. Badanaa waxaa loo xushay fudeydka iyo daryeelka timaha ay leedahay; Waxay u adeegtaa labadaba inay shaqo tagto maalinba maalinta ka dambeysa, iyo xaflad habeenkii ah.
Faahfaahinta ragga waa ha uga tegin xagga hore adkayn. Halkii, waa inay noqotaa mid dabacsan, oo aan wejiga ku dhicin.
Khabiirada weyn ee moodada ayaa qeexaya timahan dheer sida isbedelka runta ah 2018. Muuqaalo kala duwan ayaa la sameyn karaa iyo muuqaalka dumarka waa la damaanad qaaday.
Dhererka goos gooskani waa dhowr inji oo ka sarreeya garabka. Noocyada lagu guuleysan karo way kala duwan yihiin waxay kuxirantahay qaabka aad dooratay inaad qaabeyso. Waa loo goyn karaa si toos ah ama miisaan ah, in kasta oo beddelaad kale ay tahay in loo shanleeyo dhinaca, dhexda ama dhabarka.
Dadka caanka ah ee dejiya isbeddellada timo dhaadheer
Johnny Deep: la joogitaankeeda dahsoon iyo dabacsan wuxuu xirtaa timo dhaadheer oo astaan ​​shaqsiyeed leh. Mawjaddeeda waxay siinayaan mugga ugu habboon ee ka dhigaya mid u muuqda mid qasan oo hagaagsan isla waqtigaas.
Chris Hemsworth: Jilaagan wuxuu leeyahay tallaabo jaranjaro ah oo lagama maarmaan u ah raggaas oo timo toosan leh. Qaabka ayaa kuu oggolaanaya dhaqdhaqaaq hel oo muuji muuqaalka wajiga.
Brad god: Waxay ahayd mid ka mid ah horudhacayaasha timaha dhaadheer ee caanka ah. Iyada oo lagu kala tago bartamaha, waxay xoojineysaa saameynta iyada oo la iftiiminayo waxyaabaha muhiimka ah qaarkood; Waxaa sidoo kale lagu arkay isagoo garaacaya dhacdooyinka qaar.
Qalabka Harington: iyada oo curlsheeda ah ayay ku guuleysanaysaa saameyn qabow oo aan caadi ahayn. Laakiin dhab ahaantii waxay waqtigeeda ku bixisaa si taxaddar leh dib ugu shanlee; Xaqiiqdii, isticmaal alaab gaar ah si aad u ilaaliso timaha.
Tilmaamaha daryeelka timaha dheer ee ragga
Si aad u xidhato timo dhaadheer oo jilicsan, tabaha qaarkood waa la raaci karaa:
Si taxaddar leh u dooro alaabada lagu dhaqo, iyadoo loo eegayo nooca timaha.
Ha iloobin iibso qaboojiyaha si loo fududeeyo qaabka.
Qalajiyaashu maaha isticmaalka maalin kasta maxaa yeelay way dhaawaceen. Waa inaad waqti u hurtaa daqiiqadahaas.
In kasta oo aysan u baahnayn booqashooyin badan oo timo jaraha ah, marmar waa inay u baahdaan talooyinka taabo. Marka timuhu wey kori karaan iyagoo caafimaad qaba oo xoog badan.
Kuwa ku dhaca timo lumintu waa inay isticmaal alaabada si aad u xoojiso.
Ha ku xadgudbin isticmaalka jel. Haddii ay suurtagal tahay u codso kaliya dhacdooyinka gaarka ah.
Dhis caadada cadayga meenka habeen walba. Tani waxay ka hortageysaa guntimaha daalka ah waxayna siinayaan dhalaalka la doonayo.
Hipster Cut: Ragga oo Timo Dheer Sanadka
Sanadka 2018, midka sanadka ee loo doorto ragga raba inay istaagaan ayaa ah "Hipsters"; waa wax weyn maxaa yeelay wuxuu la qabsadaa nooc kasta oo timo ah oo fudud. Waa in loo oggolaadaa inay ka koraan garbaha hoostooda ka dibna timaha ayaa kala duwanaan doona.
Si aad u dhammaystirto muuqaalkan, ragga waxay u baahan yihiin inay ka baxaan gadhka sida ugu adag ee suurtogalka ah. Taabashada ugu dambeysa waa inaad shanleeysaa labadoodaba intaadan bixin; natiijadu waa muuqaal geesinimo leh, raganimo iyo caasinimo leh; Waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in timuhu aysan marnaba u muuqan kuwo kacsan ama wasakh ah.
Iyada oo timahan dheer waxaad la bixi kartaa adigoo timahaaga hoos u dhacaya maalin kasta. Sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fiican in la isku daro nabar dameer ah oo leh jilacyo dabacsan oo galabnimo ah; iyo dhacdo habeenkii ah xitaa waad ku tuuri kartaa wax walba alaabta qaar.
Ragga leh wejiyo saddex xagal ah ayaa si aad ah loo jecel yahay marka la sameynayo googo'aan. Lakabyada iyo dhabannadeeda waxay qariyaan ceebaha wajiga. Si kastaba ha noqotee, qaabkani wuxuu la midoobi karaa qof kasta, qof walba wuu isticmaali karaa haddii uu dareemo raaxo iyo kalsooni.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo dheer timo ragga